Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Julayi 2020	• 7 Comments
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Julayi 2020	• 17 Comments
Ukuboniswa kwe-21 kaJuni, uWillem Engel, uMordechay Krispijn, uJeroben Pols, ubuhlanya bentsholongwane kwaye yintoni eza kulandela?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Juni 2020	• 17 Comments
Izolo ndiyichaze ngokufutshane imiboniso ngeCawa yama-21 kaJuni eHague. Kusenokwenzeka ukuba ukhe wakwazi ukubona imifanekiso apha naphaya kwaye mhlawumbi wafumanisa ukuba zonke "zilungiswe" zilungelelaniswe. Uye wafumanisa ukuba abarhanisi baphume kwizikhephe zamapolisa. Kungaphikiswa ukuba […]
Utyelelo lulonke: 4.286.841